Arch Linux Basic Kugadziridza | Kubva kuLinux
Arch Linux Basic Kugadziridza
Alexander ponce | | GNU / Linux, Yakurudzirwa, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Pakupedzisira, tinoisa XORG uye ayo akagadzirira-kushandisa zvishandiso, zvisinei zviri kwatiri kuti tigadzirise mashoma mashoma madiki kuti ave nazvo zviri nani.
Iri gwaro rinotarisa zvakanyanya pa XORG, kunyange zvichitibatsirawo kuva neyakagadziriswa basic yedu system.
Iri gwaro rinobatsira kwazvo munzvimbo dzakareruka senge Openbox, Zvikuru, DWM, Etc.
Mamwe matanho mune ino gwaro kwete zvakakosha kana iwe uchida kuisa pre-yakagadzirirwa mamiriro (Gnome, KDE, Sinamoni, XFCE, Nezvimwewo.) Sezvo nharaunda idzi dzakagadziriswa otomatiki, unogona kusvetuka matanho ne «*«, Kunyangwe ivo vachikurudzirwa kana iwe uchida kuve neyakakosha system yakagadzirirwa.
p chimiro = »zvinyorwa-zvinonongedza: ruramisa»>
Ini ndinokurudzira kuti iwe uite iri gwaro pamwe neakakosha graphical nharaunda (twm) yatakaisa kare, sezvo isu tichizoda kunyora kumisikidzwa (mamwe akareba) uye mukati twm Tinogona kuteedzera nekunamatira kubva kuXterm terminal (zviripachena tinoda bhurawuza kuti tiwane gwaro iri kubva kuArch Linux, kana bhurawuza rekuda kwako raiswa isu tinopinda gwaro iri, teedzera uye unama mirairo).
Kutanga graphical nharaunda: $ kutanga
Kuti unama gwaro rinotungamira muXterm: Shift + Isa
1 Gadza keyboard distro kuXORG
2 Gadzira ako ega maforodha
3 Wedzera zvinyorwa zvevana
4 Kuisirwa Yaourt
5 Pulseaudio Kuisirwa
6 Vhoriyamu kiyi rutsigiro *
7 Rutsigiro rwekuzivisa *
8 Yakakurudzira kuiswa kwefonti
Gadza keyboard distro kuXORG
Pakutanga isu takaiisira iyo system, ikozvino iri kushayikwa kune yakakosha nharaunda yeiyi isu tinogadzira keyboard yekumisikidza faira.
Mukati mefaira tinowedzera:
Wedzera: es o latam, zvinoenderana nekhibhodi yedu distro.
Hauzive kuti yako keyboard distro chii? (Dzvanya pazita reiyo distros pamusoro).
• Muenzaniso: la-latin1
chidimbu "InputClass" Chitupa "system-keyboard"MatchIsKeyboard" pa "
Pfungwa "XkbLayout"  "latam"
Pfungwa "XkbModel" "pc104"
Pfungwa "XkbVariant" "deadtilde, dvorak"
Pfungwa "XkbOptions" "grp: alt_shift_toggle"
Iye zvino keyboard yedu yakagadziriswa mune yedu system.
Gadzira ako ega maforodha
Iyi nhanho kwete Izvo zvinofanirwa kuitwa nevashandisi vanozoisa Gnome, nekuti ivo vanogadzirwa otomatiki.
Iye zvino kune edu epamoyo maforodha (Desktop, Kurodha pasi, Mumhanzi, Nezvimwewo).
Kune izvi tinoisa chishandiso xdg-mushandisi-madhiri:
$ sudo Pacman -S xdg-mushandisi-madhiri
Pakupedzisira tinozviita kuti zvigadzire maforodha edu.
Wedzera zvinyorwa zvevana
Isu tinovhura iyo faira /etc/pacman.conf
Kana iwe ukaisa Arch Linux 64-bit (x86_64), zvinokurudzirwa kuti iwe ugone kugonesa, kuti ugone kumhanyisa 32-bit (i686) kunyorera. Kuti tiigone tinobvisa "#" kubva pakutanga.
Sanganisira = /etc/pacman.d/mirrorlist
Inodikanwa kumisikidza yaourt, Virtualbox mapakeji pakati pevamwe.
Isu tinowedzera iyo kumagumo efaira redu
SigLevel = Usambofa Server = http://repo.archlinux.fr/$arch
Pakupedzisira isu tinogadziridza zvinyorwa:
$ sudo Pacman -Ehe
Chii chinonzi yaourt?
Icho chishandiso chakapihwa nharaunda yenzvimbo yedu, basa rayo kuwedzera kusanganisa kuwana kune iyo AUR repository, iyo inobvumidza iyo otomatiki yekuunganidzwa kwemapakeji uye kumisikidzwa kweakasarudzwa PKGBUILDs mukati meAUR.
Yaourt inowedzera simba uye kupfava kwepacman, ichiwedzera zvimwe zvinobatsira uye nekupa yakanaka, yevaravara kuburitsa, yekudyidzana yekutsvaga modes, uye zvimwe zvakawanda.
ZANO: Kugadziridza iyo sisitimu yese (kusanganisira mapakeji akaiswa kubva kuAUR):
$ yogati -Syua
Iko hakuna kudikanwa kwekutaura nezve izvi, sezvo iri pasuru yakajairika uye yakafanogadzwa-kuiswa mune mazhinji maGnu / Linux distros, kuve neodhiyo odhiyo mune yedu system, yakapusa pane iyo yakapihwa neALSA.
$ sudo Pacman -S pulseaudio pulseaudio-alsa
Vhoriyamu kiyi rutsigiro *
Muzhinji, mabhenji ekudzivirira ekupenya akagadziriswa otomatiki saka hatidi kuwedzera tsigiro (yemidziyo isingashande makiyi ekupenya kumagumo kwegwara pane nhanho yenguva pfupi), panzvimbo pemakiyi evhoriyamu kana tinofanira kuzviita. Kune izvi tinoisa maturusi Xbindkeys y Pamixer .
Isu tinoenderera nekuisa Xbindkeys.
Pamixer inowanikwa muAUR, kuiisa isu tinoda yaourt.
$ yogati -S pamixer-git
Isu tinogadzira iyo yekumisikidza faira
# kwidza vhoriyamu
"pamixer - kuwedzera 3"XF86Audiosimudzavhorumu
# yakaderera izwi
"pamixer - kuderera 3"XF86AudioPasivhorumu
Isu tinochengetedza shanduko uye tinobuda nano.
Pakupedzisira, tinowedzera Xbindkeys kune yedu runyorwa rwekutanga zvirongwa (.xinitrc).
Isu tinogadzira yedu .xinitrc faira:
$ nano .kitorec
Mukati mefaira redu, tinowedzera kumagumo:
Tsigiro yekuzivisa *
Isu tinoisa Zivisa-osd kubva kumahofisi epamutemo.
$ sudo Pacman -S zivisa-osd
Shanduro yakashandurwa inowanikwa kubva kuAUR yekugadzirisa.
$ yogati -S zivisa-osd-inogadziriswa notifyconf
Iye zvino tinoedza izvo zviziviso
$ zivisa-tuma "Mhoro Nyika"
Isu tatoisa Zivisa-osd mune yedu system.
Imwe inoshanda uye yakakurudzira notifier ndeye Xfce4-notifiedIzvo zvinoenderanawo nedzimwe nzvimbo dzakajeka.
$ sudo Pacman -S xfce4-zivisa
Kugadzirisa, isu tinoita
Yakakurudzira kuiswa kwefonti
Isu tinoisa mafonti ekutanga kune yedu system
$ sudo Pacman -S ttf-rusununguko ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-droid ttf-freefont
Pakupedzisira tinoisa minimalist font package.
$ sudo Pacman -S artwiz-mafonti
Nezvo isu tinopedzisa iyo yekutanga Arch Linux setup!
Mushure mekumisa XORG, Sisitimu yedu yakagadzirira kuiswa kwechero graphical nharaunda.
Kuisirwa kwe Gnome pane Arch Linux.
Kuisirwa kwe KDE pane Arch Linux.
Kuisirwa kwe Xfce pane Arch Linux.
Kuisirwa kwe Cinnamon pane Arch Linux.
Kuisirwa kwe Openbox pane Arch Linux.
Ndapota! tumira yako matambudziko / kusahadzika mune yangu email: arch-blog@riseup.net
Tibatsire nekutinya kamwe chete!, govana gwaro neshamwari dzako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Arch Linux Basic Kugadziridza
Puddy mashiripiti akadaro
Ikoko ndinosiya yako gumi, yakanaka posvo, taringuero xpert
Pindura Puddy Mashiripiti
I think ndakarasika, takatanga nguvai kuva Taringa? 😀
Alexander ponce akadaro
Ndatenda zvikuru, ndakazosimuka nemumara ee
Pindura kuna Alejandro Ponce
Nhungamiro yakanaka. Ndinovimba munguva pfupi inotevera pachave nezvimwe zvemamiriro enzvimbo, nekuti ini ndinoshandisa elementaryOS nepantheon asi ini handidi Ubuntu. Ndinoshuva dai ndaigona kuva nayo muArch.
Yakawedzera, ruzivo urwu rwuri paArchLinux wiki uye zvirinani zvirinani kuvandudzwa. Nhanho imwe neimwe inowanzo tsanangura zvazvinoita uye nei, ichiita kuti mushandisi adzidze mukuita. Ini ndinofunga kuti kana uchidzokorora ruzivo iwe unofanirwa kuwedzera zvinopfuura zvakangonaka zvidiki zviratidzo.
Zvakanaka, ndinofunga iwe unofanirwa kuratidza kuremekedza kwakawanda kune basa rinoitwa nevamwe. Zvirinani akanetsekana nekuisa zvikwangwani zvidiki.Iko chii chawakaita kunze kwekushoropodza?
Ini ndinofunga kuti dzimwe nguva iyo Arch Wiki inenge ichivhiringidza, kuti vanokuita iwe dzidziso yakadai, inogara ichikosheswa.
Chokwadi, zvirinani zvirinani asi zvevashandisi vemberi. Munhu ari padyo nevashandisi vatsva anowedzera kana kushandura ruzivo urwu achichinjanisa kusvika padanho revashandisi vatsva, ndosaka iri riri basa rinorumbidzwa, rinodiwa. Kana zviri zvinyorwa zvakanaka zvinoyevedza, iri nzira yekuronga uye nekupa ruzivo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuverenga uye kunakidza.
Chekupedzisira, ini ndoda kuwedzera kuti kushoropodza kwakanaka sekureba sekuvaka. Nehurombo yako haisi.
Iri basa rakanaka Alejandro 😉
Ndiri kufara kwazvo kuti vashandisi vanokwanisa kutora izvo zvandinopa mumipiro yangu (kupfuura ruzivo), vachiita kuti zvirevo zvavo ive nzira chaiyo yekutenda.
Ndatenda zvikuru nemhinduro yako, kwaziso.
Zviri nyore kutsoropodza. Ini ndinoda "akanaka madiki masign" inopa mashoma tekinoroji kubata pane iyo wiki.
Pindura kuna caatovarbo
Iyo Arch wiki ndeye yevashandisi vepamberi, ini ndinowana gwara iri rakakwana. kunyangwe iine hushamwari neyakafa inofa uye yakanangiswa kunyanya kune vatauri veSpanish.
Usatsamwiswe asi gwaro iri haritsanangure vadiki pane zviri kuitwa.
Evha generalize kuti vhoriyamu zvinodzora zvinoda Xbindkeys uye Pamixer. Uku kukanganisa kukuru uko kunongovhiringidza mushandisi mutsva uye / kana kukonzera kukanganisa.
Mumwe muenzaniso: Rutsigiro rutsigiro harutsamire paziviso-osd, iro pasuru ingori iko kuitiswa kunoitwa neCanonical.
Zvakadaro, hazvidiwe kana zvekumanikidzwa kana zvakachengeteka kuwedzera rekunze repositi kuisa uye kushandisa yaourt. Ingo dhawunirodha mafaera mashoma, vhura terminal mune iro dhairekitori uye unomhanya: $ makepkg
Izvi hazvitsanangurike uye zvinopedzisira zvafumura mushandisi kumatambudziko ekunze ekuchengetera, mukuwedzera pakusadzidza kuvaka package.
Ini ndaigona kuenderera, asi hazviite zvine musoro. Haisi kutsoropodza nekushoropodza zvandinoita, asi ndinodzokorora kuti pamusoro pekuwedzera, yakawanda yeruzivo irimo mugwara iri haina kukwana uye haina basa. Ini ndinokurudzira kune avo vanoda kushandisa Arch, kuti vaverenge iyo Wiki. Ivo vasingade kuverenga zvakanyanya ruzivo,
Zvakanaka, ndinofunga kuti zvingave zvakanaka kuti iwe "utaure" nemuridzi wepositi uye kana iwe uchifunga kuti mupiro wako unofanirwa kuvandudzwa kuti udaro, kana kugadzira posvo nyowani. Iyo blog inofanirwa kubatana pamwe nemumwe, kwete kutonga vamwe.
Ini handina kutonga chero munhu, ini handinzwisise kubva kuchikamui chemashoko angu chinogona kubviswa. Saizvozvowo, chirevo chekare chakaburitswa nekanganiso pachakange chichiumbwa Pano unogona kunyatsoverenga zvandaida kutaura:
Ndatenda zvikuru nekuda kwema Tutorials aya, vakandibatsira zvakanyanya, zvese zviri nyore.
Kana zviri zvinyorwa zvawakaisa kuti uise, ini ndaizowedzera iyo ttf-liberation iri yemahara vhezheni kutsiva Arial neNguva, uye ini ndaizobvisa iyo ttf-bitstream-vera, sezvo Djavu iri mhando yekuvandudza yeaya.
Uye zvakare, ini ndinokurudzira zvakasimba kumisikidzwa kweiyo Infinality bundle:
Ini ndaifunga kuti ttf-liberation yanga yatowedzerwa, ndobva ndavachinja.
Ndatenda zvikuru nekugovana.
Ini ndinosiya mienzaniso yakati wandei kuti iwe uone kuti hakusi kushoropodza kusinganzwisisike:
1- notify-osd haina basa uye ingori yeCanonical yekumisikidza chiziviso-daemon, pasuru inongodiwa na wammu.
2- yaourt inogona kuiswa pasina chikonzero chekuwedzera zororo rekunze. Pamusoro pekuvanda kubva kune mushandisi mukana wekudzidza kuvaka pakeji ne makepkg, zvinomuisa panjodzi yekushupika iyo inogona kuve yekunze nzvimbo.
3- Kana pamixer kana xbindkeys inodiwa pane akawanda makirabhu ekudzora makiyi evhoriyamu, iko kwakaipa generalization.
Ini ndaigona kuenderera, asi hazviite zvine musoro. Arch haisi "kunze kwebhokisi" distro, zvinoda nguva yako nekuzvipira uye nzira yakanakisa yekuziva kuti iri kuburikidza newiki yayo. Kuda kusvetuka iro rakakosha ruzivo rwegwaro pamwe nekukurumidza gwara riri kupokana nezvakataurwa distro zvinokurudzira:
Iyo Do-It-Iwe pachako ideology inoda kuti mushandisi azive zvavari kuita. Izvo hazvina kukwana kumhanyisa akateedzana emirairo usati watanga kuziva zvavanoita kana kunyangwe kana zvichidikanwa.
Tine urombo, izvi zvakatumirwa netsaona: https://blog.desdelinux.net/configuracion-basica-de-arch-linux/comment-page-1/#comment-113187
Ndokumbira ubvise. Ndatenda.
Zvamunotaura zvinoita sekunge zvinondinakidza, asi kune avo vachangotanga nzira yakapusa yekuita zvinhu nekuteedzera zvakaitwa nemumwe munhu uye kana iko kubirira kana kuteedzera kuchishanda zviri nyore kwavari kuti vanzwisise zvinoitwa pavanosangana imwe dzidziso yehunyanzvi uye aya ndiwo maitiro aunodzidza.
Kana tikatarisa hupenyu isu pachedu, takakura tichiteedzera vakuru vedu uye vozotitsanangurira zvinhu, zvakanaka kana iwe ukateedzera zvakashata zvinhu zvavakakupa iwe. Asi isu tinokura uye tinodzidza nekuteedzera uye gwara rakanaka kwazvo rakagadzirwa neshamwari Alejandro chinangwa chekuita izvozvo, kubatsira neophyte kuti ipinde muhombe uye kwete kumusundira kure.
Chekutanga pane zvese ini ndoda kukutendai nekugovana maitiro ako, ndicho chinhu chakakodzera kuita sekureba sekuremekedza.
Zvino nezve maitiro ako:
1.- Zivisa-osd: Sezvawataura iko kumisikidza kwepasuru iyi, kana vashandisi vaida kushandisa standard (ziviso-daemon), nekuda kwezvikonzero zviri pachena vaizozviita, zvisinei haisiyo yega sarudzo yandinotaura, mushandisi uyo ari uzviwanire usina kugutsikana uye / kana kusahadzika iwe unofanirwa kuziva kuti pane zvakawanda zvakawandisa sarudzo dzekushandisa.
2.- Yaourt: Muchikamu chino izvo zvawataura ndezvechokwadi, kumisikidzwa kweyour kwakazvimiririra nezvakachengetedzwa, zvisinei ndiyo nzira iri nyore kuzviita (sekutsanangura kwandichazoita gare gare, chinangwa chikuru chevatungamiriri vangu chiri nyore), Sei uchitambisa nguva pane chimwe chinhu chinonditungamira kuchinhu chimwe chete? Nezve kushomeka kwekupa mushandisi nzvimbo yekunze, chikamu ichi ini ndinotora zvisina musoro, ndichitaura pamusoro pekushomeka kwenzvimbo, yakataurwa uye iri muArch Linux neFrance (?), Zvinenge zvichinzwanana kana iwe ukazvitaura mune repositi ye mumwe mushandisi.
3.- Pamixer uye Xbindkeys: Sezvakataurwa pamusoro pemapakeji maviri aya, mashandiro eXbindkeys haatombowanda kana pasi pekupa nzira dzekushandisa dzebhodi (dzinogona kusiyiwa kana nharaunda yakatogadzirirwa ikashandiswa, ndinovimba waverenga iyo inotungamira) uye iyo yaPamixer (zita rayo pachayo rinodaro) mubatsiri kuPulseaudio, iro basa rayo ndere kupa uye kuchengetedza odhiyo odhiyo.
Iwe unotaura kuti kuisirwa kwayo hakuna kudikanwa, ini ndinokukoka iwe kuti uite bvunzo munzvimbo huru (twm) iyo inowanikwa munzvimbo zhinji dzekuparadzira, kana chimwe chinhu chandichazoshambadza ndechekuti ini ndatozvisimbisa.
Nezvaunotaura: "Pfungwa" Zviitire wega "inoda kuti mushandisi azive zvaari kuita." Ini ndinobvumirana zvizere, izvo zvinosungirwa, mushandisi anofanira kuziva zvaari kuita nehurongwa hwake, uye iko kusaziva kwechokwadi iye mushandisi anoita "kuraira" (sekutaura kwawakaita), usina kutanga wawana ruzivo rwakadai.
Nezve yako chirevo: ruzivo rwemberi nezve ino sisitimu, kuti mushandisi mumwe chete anogona kuchinjisa nhanho kuzvinodiwa zvavo nekutsiva / kusiya maturusi andinotaura, zvisinei ndinoona kuti iwe wakataura pane izvi nechido chekusvota. Mune ino nhanho ini handigone kutaura ndichipa kumeso kweblog, zvisinei, ndichidonongodza manejimendi, ini ndoda kutaura kuti chinangwa chese zvinyorwa, zvidzidzo, nhau kana chero chavanoda kuchidaidza izvozvi chakaburitswa muDesdeLinux, kupa mushandisi gwaro rezvirongwa uye / kana maitirwo anoita basa rayo guru uye pamusoro pezvose zvinowirirana. Neichi ini ndinopa chirevo kune wese mushandisi weblog, kuti havanamatire kune ruzivo rwunoratidzwa muDesdeLinux, kana chimwe chinhu chichiita seichifadza / kusahadzika ibasa ravo kubvunza mamwe midhiya kana munyori, zvisinei sezvandambotaura, zvinyorwa zvese zvakaburitswa mu Kubva kuLinux inoongororwa isati yaburitswa, iyo inotungamira mushandisi kune yakatarwa, yakasimbiswa uye yakachengeteka ruzivo pane iyo nyaya.
Chinangwa chikuru chevatungamiriri vangu parizvino chakaburitswa ndechekupa mushandisi magwaro akakodzera emazita ataurwa, kugadzirisa ruzivo mune yakapusa nzira, ndingati yakajeka, yevashandisi vese uye inogona kunzwisiswa nenzira inonzwisisika uye inonzwisisika.
Kwaziso kubva kuMexico.
Mhoroi, zviri pachena kuti hatisi kuzosvika pakunzwisisa pamusoro pekubatsira kana kwete kwegwara, iwo maonero ehukama. Ini ndinoisa yangu pachinhu chekuti Arch haisi yemunhu wese uye kana zvirizvo, zvinoda kuti novice mushandisi kudzidzisa nekubhanga iyo wiki (inonetesa kana kwete) kuti iwirirane nezvavanofunga kushandisa.
Ini handigone kupatsanura kuti basa rako rakafananidzwa nepfungwa yemagwara akakurumbira "Zvekuita mushure mekuisa Ubuntu XX.XX" uye ndinotenda kuti nzira yakadaro haina kukodzera kubva kuArch.
Semuenzaniso mutyairi wese ane pfungwa diki dzemakanika kuti akwanise kushandisa mota uye havasi vese vanobvunzwa kuti vanzwisise zvinhu zvakaita sekushanda kwemusiyano. Zvino kana iwe uchifunga kutyaira Nascar mota, iwe unofanirwa kuve nehupamhi hwakawanda uye hwakasimba hwakasimba.
Kune rimwe divi, archlinux.fr domain haisi yepamutemo uye kana kunzi repo. Ivo chete vane mvumo yekushandisa zita. Kana mangwana mumwe munhu akachinja zvine hungwaru pasuru yeiyo repo, kuva nesarudzo "SigLevel = Never" inozopedzisira yaisa chakashata.
Ndipo panobva kutsoropodza kwangu kukuru, njodzi hadzina kutsanangurwa, kana chikonzero chesarudzo iyi.
Ini handinyore nechinangwa chekusvota, ini ndinotora chikamu mumaforamu mazhinji uye kutsika-tsika ndicho chinhu chekupedzisira chinondifadza. Pandakati mukana wekudzidza wakavanzika kubva kumushandisi ndinoreva nechikonzero:
Nzira yaArch haisi yekuita kuti zvinhu zvive nyore, asi zviri nyore. Kudhawunirodha mafaera maviri ePKGBUILD ne wget, kumhanyisa makepkg uyezve sudo pacman -U package, iri kudzidzisa maitiro ekugadzira package uye kuiisa munharaunda.
Nekuregeredza iyi nhanho yakakosha, kwete chete iye mushandisi wegwara asingaidzidze, asi sekutaura kwandamboita, anopedzisira akanganisa kuchengetedzeka kwesystem yake asingazvizive.
Ndinokumbira ruregerero kune avo vakafunga kuti kutaura kwangu kwekutanga kwaishora, iyo yakanga isiri iyo chinangwa changu Chisarai! "
Chekutanga pane ese aya magwara zviri pachena kuti haapfuure iyo Arch wiki (uye ini handiedze kuzviita), zvisinei aya ma "nyore" magwara ndeye kutungamira vashandisi vanoda kuve neruzivo rwakawanda nezve Gnu / Linux, sezvo Arch Linux iri nyore chaizvo uye unodzidza zvakawanda naye.
Pakutanga iwe unotaura kuti Arch haisi yevashandisi vatsva / vepakati, uyezve unotaura nezve ruzivo rwepashoma urwo mushandisi anofanirwa kuve naro muArch (kuisirwa mapakeji).
Nekushandisa repository pachinzvimbo chekuzviita nemawoko, iwe unowana zvakanakira nekuipira (izvo zvisina musoro uye zviri pachena).
Zvimwe zvinokanganisa kushandisa repo ndeyekuti huwandu hwemapakeji hushoma, sezvo mazhinji ari mune yechinyakare nyika, kunyangwe izvi zvichindiponesa kuisa maturusi (wget, kunyangwe ndichigona kuwana mapakeji neimwe nzira).
Iwe unoti: "Arch nzira haisi yekuita kuti zvinhu zvive nyore, asi zviri nyore ...". Yako, ndeipi iri "yakapusa"? (zviri pachena kushanda mumavara emhando):
1.- Wedzera dura, gadziridza zvinyorwa uye isa pasuru.
# pacman -Sy yourt
2.- Shandisa dzimwe nzira, decompress iyo pasuru, enda kukero iko iko package uye uite $ makepkg -si.
Mirairo: 10 (kwete kuverenga mirairo yekuisa chishandiso kuwana mapakeji, kana kuwedzera iyo inozivikanwa & &&).
$ cd package-mubvunzo
$ cd yako
Zvisinei nyaya idzi ndedzekuti, ngatitii, hazvina musoro kutaura, kuiswa kwe "X" package kuburikidza neyekuchengetedza kana nemawoko.
Uye zvakare, mushandisi anogona kubvisa iyo repositori mushure mekuisa iyo Yaourt package uye / kana imwe yeanofarira, pasina dambudziko.
Hazvisi nekuti zvinoita sekunyepedzera, sezvo ini ndichifunga zvakafanana newe, Arch Linux ndiyo nzira iyo iwe yaunofanirwa kuve neruzivo rwemberi rwekuisa nekushandisa iyo system, uye kunyangwe ichinzwika kunge yevana, kurangarira Sekuru Ben: «Chinhu chikuru simba rinouya nemutoro mukuru ”uye pamusoro pezvose uchiziva kuzviita.
Zuva uye Kunyarara akadaro
Uri kutamba benzi here iwe? Iri gwaro ndiwo mukova wekuziva Arch Linux, ndeye kuziva kuti pane chimwe chinhu "zvimwe", hazviite kunge ihwo ruzivo rwese rwakakosha kubata Arch Linux 100% (kunze kweiyo "chaiyo" imwe), asi ku SHOW vashandisi vezvimwe zvinogoverwa (uye pamwe vanhu vatsva vari kutsvaga ruzivo nezveLinux) nezve kuvapo uye mashandiro eArch Linux nenzira yepamusoro. Uye izvo zvainoratidza kuti zviitwe mumaraini aya zvinotungamirwa kuti uzviite muKUEDZA komputa kana mumuchina chaiwo ... Ingoverenga gwara rekutanga kwarinonyevera kuti diski ichacheneswa.
Pindura Zuva uye Kunyarara
Uyu, Poringa anorarama, haha, kunze kweizvozvo ini ndinoda iyo posvo, kunyangwe vazhinji vachizvishora, zvinoratidzwa kuti vashandisi vevashandi vanogara vachitanga neposvo senge pane kuenda zvakananga kuWiki, sezvavanokurudzira, mushure mekuita base vanowana izvi.
Zuva raunoita »Isa Pantheon pane Arch Linux.» Ndichakuita chiyeuchidzo.
Tiri vaviri 😀 Ini ndinotsigira kufamba
Pantheon pane Arch Linux:
Ndinovimba vanoteerera hahaha, iwo mutungamiri ari mukuvandudza
Ndinoda ichi chinyorwa, ndinoda archlinux ndiyo yandinofarira mushure mekuyedza yese. Uye zvakanyatsotsanangurwa uye kutsanangura kuti izvi sei, iwe unodzidza zvinhu zvakawanda.
Ini ndinogona kungoti, ndatenda zvikuru.
Mhoro. Chekutanga pane zvese, ndinokukorokotedza iwe pagwaro uye nesimba rese rawakaita mukugadzira.
Ini ndaisa arch ichiteera ino nhanho-nhanho gwara uye zvinenge zvese zvave zvemhando yepamusoro, pasina dambudziko uye kufambisa nhanho dzakanyanya kunetsa mune yepamutemo wiki
Asi ini ndoda kutaura pfungwa:
Pakutanga ndakatevera nhanho nedanho gwaro asi ndaive nedambudziko rekubatanidza neinternet mushure mekuitazve iyo pc kana system yaiswa. Ipapo ini ndanga ndichifananidza gwara rako newiki uye ini ndaona kuti gwara rako haritaure chero nguva kuti tinotora pasi dialog package iyo inoshandiswa kune wifi-menyu uye tpco iyo iw package. Pasina iwo mapakeji zvaive zvisingaite kuti ndibatanidze neinternet uye saka ini ndaisakwanisa kuita pacman kugadzirisa kana kuisa xorg kana chero chinhu zvachose. Ipapo ini ndakatevera gwara rako asi ndisati ndatanga patsva ndakaisa iwo mapakeji sekutaura kwewiki uye ini ndakanga ndisisina kana matambudziko. Handizive kana iwe wakakanganwa kutaura nezvavo kana paine nhanho yepakati iyo yandakapotsa. Kune vamwe vese, ndinotenda kuedza kwekurerutsa kwevashandisi veavice seni. Kwaziso.
Zvinoenderana nekombuta, ini ndakatevera iyo wiki, asi ini ndaive nemamwe matambudziko, kunyanya neinternet, sezvo ini ndaigona kushandisa wifi menyu, asi maneja maneja haana kudaro, pachinzvimbo ini ndakaita chinhu mugwaro iri, ini ndakamisa zvakananga network network, kwete Ini ndakagonesa kana kuremadza chero chinhu sekutaura kwewiki, uye network network uye wifi yakandishandira
Shamwari yeSpanish (Latin America) ndiyo latam kwete la-latin1
Iyo rondedzero inogona kuonekwa pano /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
Kwaziwai, ndatenda nemupiro 🙂
Ndatenda kwazvo, zvakandibatsira zvakanyanya !!!
Anoshamisa gwara !! Kutenda nekuigovana, zvakanaka, izvi uye ako ese magwara paArch.
Mhoroi, ndatenda nemutungamiri, chokwadi ndechekuti chakandibatsira zvakanyanya, kunyanya chikamu ichi, handizive kana zvaive zvakakodzera kuti uzviite, asi ruzivo urwu rwakakamukana kwazvo muwiki, saka zvakanaka kuve nazvo zvese mune imwe.
Gwaro rekutanga rawakaisa rakandibatsirawo, pachokwadi, kuita shanduko diki dzaunoisa zvine chekuita neiyo wiki wiki, ini ndakawana yakazara system, maneja maneja anonyanya kukosheswa, zvinoonekwa kuti unofanirwa kuisa iyo imwe uye kanganwa nezve dzimwe sarudzo, sezvo ivo vachigadzira zvisingaenderane, zvirinani zvakaitika kwandiri kuti ini ndaigona kungoshandisa iyo wifi-menyu.
Kwaziso uye makorokoto nekuda kweaya akanaka tutorials anoita kuti tiwedzere nekuzvikurudzira kupinda munharaunda ino yakanaka yeFree Software uye kusiya kumashure kweyepamoyo Software.
Ipapo ndanga ndichida kukuudza kuti ndiri kutevera ese maArchilinux ekuisa tutorials asi iyo kde haina kunyatso gadzirisa zvachose, mozilla inoita kwandiri isina mhedzisiro, yakashata kwazvo, zvimwe zvese zvakanaka, ndiri kungonetseka zvishoma neSpanish mutauro Nekuti zvese hazvina kududzirwa kwandiri, Mozilla ichiri muChirungu uye menyu yemamiriro eiyo bhatani rekurudyi inoonekwawo muChirungu kana iwe uine moyo munyoro kuti ugone kundibatsira, ndingafarire kwazvo.
Mushure mekuve nekuiswa kweyourt -S pamixer-git, ndinosvetuka mune ino terminal iyi: Pasina kutsigirwa package: Inogona kuva nenjodzi iyo yakadudzirwa ndeiyi: Pasina kutsigirwa package: Inogona kuva nenjodzi, inogona kuva: ((, Thanks for everything and if they are ane mutsa kundibatsira, ndingafarire, kukwazisa uye kukuona munguva pfupi.
Chidimbu chedhairekitori, ndakachimisikidza, uye ini ndikatevera zvese kune iyo tsamba uye ndakakwana, ndinokutendai pamwe neboka rese reBlog ino, nekuti nekuda kwako, vazhinji vedu tinokurudzirwa kushanda ne software mahara, kwaziso kune vese uye makorokoto nebasa iri rakakura.
Mubvunzo mumwe kana usina kunyanya kubvunza, uri pamusoro pehuwandu hweodhiyo, ndinofanira kuimisa sei kuitira kuti pese pandinotanga chikamu ini handifanirwe kuiisa nekuti inogara pasi uye pese pandinotanga musangano ndinofanira kuisimudza, uye chii chiri raira kuti ukwanise kuona iyo applet ine ruzha, nekutenda nekwaziso.
Ini ndinongoda nhanho imwe chete, kumisikidza Xorg, ungawana here gwara? Ndatenda!!!
Kutenda nedzidziso iyi asi ndine zvinokanganisa zviviri
1.-Mune ino yakakosha yekumisikidza dzidziso, pandinopedza uye kutangazve ini ndinonyora startx uye haindibvumidze kuti ndipinde graphic mode, «Iyo XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) inoshuma:> yambiro: mhando one_level ine 1 nhanho, asi ine zviratidzo zviviri zvinosiya zvimwe zviratidzo. Zvikanganiso kubva ku xkbcomp hazvina kuuraya tehe x server xinit: kubatanidza x server yakarasika yakamirira x server kudzima (EE) Server yakagumiswa zvinobudirira (2). Kuvhara logi faira. »
2.-Ini handigone kutanga windows, haisi mugubhu
zvakanaka ini ndakawana mhinduro
Handizive kana vachigona kundibatsira, handikwanise kuisa Yaourt, ndinowana iko kukanganisa kunotevera kana ndichiita rairo sudo pacman -S yaourt
kukanganisa pasuru kushaiwa chinodiwa siginecha
faira / var / cache / pacman / pkg / package-query-1.4-1x86_64.pkg.tar.tz yakaora (ivalid kana yakaora package)
Pindura kune omaar
Eduardo David Paredes Vara akadaro
Iwe wakanganwa bluetooth kune avo vedu vanoshandisa laptop (Kana zvakajairika, ndinofunga).
Isa bluez uye bluez-utils
~ $ sudo pacman -S bluez bluez-zvishandiso
Takura mutyairi generic.
Kutanga sevhisi uye ita kuti itange pabhoti
~ $ sudo systemctl kutanga bluetooth
~ $ sudo systemctl inogonesa bluetooth
Izvi zvinotevera handizive kana zvichidikanwa, asi ndinazvo uye handina dambudziko:
Gadzira faira mu /etc/modules-load.d rine zita rekuti bluetooth.conf woisa "btusb" mariri * Mhanya unotevera semudzi *
Uye woisa iyo yekumberi-kumagumo zvinoenderana neako interface
Pindura Eduardo David Paredes Vara
Alberto Rodriguez akadaro
Zvakanaka, kutanga kwezvose, yakanaka kwazvo dzidziso iwe yaunotipa, chokwadi ndechekuti ini ndanga ndiri Gnu / Linux mushandisi kwenguva yakareba asi ini ndaive mudiwa weDebian-based distros izvozvi zvandakachinjira kuArch handisi kuzoiburitsa kwekanguva (ndakaifarira zvakanyanya ichi distro). Zvakanaka ikozvino mubvunzo wangu, pane nzira here yekuchengetedza shanduko dzekupenya uye vhoriyamu? sezvo pese pandinotanga zvekare zvinondipa kupenya kwese uye huwandu
Pindura kuna Alberto Rodriguez
Mhoro Linuxeros, ndine zvipingamupinyi zvitatu:
1.- Kana uchitanga chishandiso uye kurodha iyo graphical nharaunda, ini ndinopinda mushandisi uye kupfuura, ini ndinowana inotevera meseji «Kukundikana kuburitsa login kuraira».
2.- Uyu murairo haushandi kwandiri $ cp /etc/skel/.xinitrc ~.
3.- $ sudo pacman -S yaourt, handikwanise kuiisa, kukanganisa: tarisiro haina kuwanikwa: yaourt
Zvese zvimwe pasina matambudziko, ndatenda.
Ndazvigadzirisa kubva pano, kwaziso.
Mhoro, mangwanani akanaka, mudiwa wangu!
Ndine dambudziko risingandibvumidze kupedzisa iko kwekutanga kweArchi
iyo 3 sarudzo
ONGEDZA SECONDARY REPOSITORIES
uye sezvo isina kuwedzerwa nemaoko pamwe ne [archlinuxfr]
asi kana uchiita iwo wekuraira: $ sudo pacman -Sy
Ini ndinowana kukanganisa: ndakatadza kuwana faira < >
Unogona kundibatsira padambudziko iri? Ndiri mutsva mukuisa dura uye ini handizive kuti ndogadzirisa sei iyi mhosho.
Dambudziko rako riri mukugadziriswa kwe
Tarisa kuti wanyora nemazvo here.
Ndokumbirawo, ndingafarire kuisa mifananidzo yekubatsira sezvawakaita iwe mukumisikidza, ini ndichiri kukwanisa kuisa arch linux zvachose, uye pano ndinogara 🙁
mhoro ndatevera gwara rako nguva dzinoverengeka uye zvese zvakanaka, (virtualbox mhosva) ndaingoda kutaura kuti wanga uchishaya madhiraivhi odhiyo.
gadzirisa ne pacman -S pulseaudio
ndatenda nemupiro uye ndine urombo nekukanganisa
Pindura kuna noob
Ndinoda kuziva kuti LXQT yaizoiswa sei
Gabriel Cervantes nzvimbo yekuchengetedza mufananidzo akadaro
Mhoroi, wakadii iwe? Mumwe mubvunzo, mukushayikwa kweyourt iyo yaive yakanakisa dura repakasiyana mapakeji. Unoshandisa chii?!, Ndinoda kuziva maonero ako uye kuti unovaisa sei,
Nenzira, zvinyorwa zvakanakisa, ndinoramba ndichivabvunza kwemakore akati kuti andinoshandisa ArchLinux
Pindura kuna Gabriel Cervantes
Kutamba neGimp: Kugadzira Bhora Rinosekesa